Nbanye na akaụntụ gị
Biko tinye adreesị ozi-e gị na akaụntụ. A nkwenye koodu ga-eziga gị. Ozugbo i natara nkwenye koodu, ị ga-enwe ike ịhọrọ ọhụrụ paswọọdụ maka akaụntụ gị.
Google sụgharịa ya
Carl Henry Consultancy - Okwu Mmalite
Mgbe 40 gbakwunyere afọ na 39 ọrụ dịgasị iche iche, emeriwo m ọtụtụ ụdị nsogbu azụmahịa ma mụta banyere akụkụ ọ bụla nke ọrụ azụmahịa na UK na gburugburu ụwa.
Achọtala m na m nwere ike itinye uru na ụzọ kachasị aga n'ihu site na idozi nsogbu na-eduga m n'ọtụtụ 'ntụgharị' na ọnọdụ nnapụta.
Otu ebe a na-arụ ọrụ, ebe 1980 bụ ezigbo ala ụlọ - ebe obibi dị ka ihe kachasị mma m mechara mezue azụmahịa na mpaghara niile gụnyere Leisure, Entertainment, Office, Retail and Commercial property types. Ọ bụkwa na m ga-ejide usoro niile nke ịzụ ahịa, mmepe, nhazigharị, njikwa na itinye ego.
Emewokwa m ka m bụrụ ọrụ m iji nọrọ n'ihu nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ ka m wee malite ebe mbụ eCommerce na 1998.- ruo ugbu a ụlọ ọrụ m ma wuo m nke ọma na 5,000 ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla ma n'eziokwu m ugbu a furu efu ọnụ !
MSA - 41A ụzọ des Jeunes